सचेत रहनुहोला ! सुनसरीको डेँगु रोग मोरङमा पनि फैलियो - Deshko News Deshko News सचेत रहनुहोला ! सुनसरीको डेँगु रोग मोरङमा पनि फैलियो - Deshko News
सचेत रहनुहोला ! सुनसरीको डेँगु रोग मोरङमा पनि फैलियो
मोरङ, जेठ २९
केही हप्तादेखि सुनसरीको धरान नगरपालिकासहित जिल्लाको विभिन्न ठाउँमा फैलिएको डेंगु मोरङमा समेत देखिन थालेको छ। हाल मोरङको केराबारी, सुन्दर हरैचासहित विराटनगर महानगरपलिकाका केही स्थानमा डेंगु देखिन थालेको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय प्रदेश १ का प्रमुख भोगेन्द्रराज डोटेल बताए।
उनले भने ‘सुनसरीमा केही हप्तादेखि फैलिएको डेंगु हाल मोरङको केही स्थानमा समेत देखिन थालेको छ।‘ डेंगु ज्वरोका संक्रमित बिरामी देखिन थालेपछि बुधबारदेखि यस क्षेत्रमा औषधि छर्किने कार्य शुरु गरिएको समेत डोटेलले बताए। धरान उमहानगरपालिकमा सो रोगबाट संक्रमित बिरामी अत्यधिक देखिएकाले नियन्त्रणका लागि नगरका सम्पूर्ण वडामा बुधबारदेखि मालाथिन फगि (स्प्रे) छर्केने कार्य शुरु गरिएको समेत बताइएको छ।
बुधबार वडा नम्बर १, २, ३, र १०, यही जेठ ३० गते १, ३, ४, र १० मा, ३१ गते ४, ५, ६ र ७ मा, ३२ गते ५, ६, ८ र ९ मा औषधि छर्किने भएको छ। यसैगरी आगामी असार १ गते ८, ९, ११, र १२ मा, २ गते ११, १२, १३, र १४ मा, ३ गते १४, १५, १६ र १७ मा र ४ गते १८, १९ मा औषधि छर्किने तयारी भएको महानगरले जानकारी दिएको छ। बैशाख ३१ गतेदेखि सुनसरीको विभिन्न ठाउँमा डेंगु फैलिएर महामारी रुप लिइसक्दा पनि नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।
हालसम्म डेंगुबाट तीन सय ३० जना संक्रमित भएको समेत प्रदेश स्वास्थ्य प्रमुख डोटेलले बताए। लामखुट्टेले टोकेको मानिसलाई दुई दिनसम्म सामान्य टाउको दुख्ने गर्छ, दुई तीन दिनपछि लगातार ज्वरो आउँछ, टाउको दुख्ने, जोर्नी र मांशपेशी दुख्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन्। यस्ता लक्षण देखिनासाथ चिकित्सकलाई चिकित्सकलाई देखाउनुपर्ने हुन्छ।
डिआइजीद्वय कार्की र शाही एआइजीमा बढुवा सिफारिस
काठमाडौं, असार ३१गृह मन्त्रालयले प्रहरी नायब महानिरिक्षकद्वय (डिआइजी) प्रधुम्न कार्की र निरज शाहीलाई प्रहरी अतिरिक्त
प्रदेश १ का साग पदक विजेता खेलाडीहरुलाई सम्मान गर्दै मुख्यमन्त्रीले भन्नुभयो-‘खेलाडीहरुले देशको इज्यत, प्रतिष्ठा र शान बढाउनु भएको छ’
विराटनगर, असार ३१ प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खेलकुद क्षेत्रलाई प्रदेश १ सरकारले
२ दिन विजाेर मात्रै चल्दा जोर सवारीधनी मार्कामा
काठमाडौं, असार ३१लकडाउनका बेला ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा जोरबिजोरको नियमलाई कडाइ गरिरहेको छ । जोरबिजोर चेकजाँचलाई
सशस्त्रका एसएसपीमाथि बलात्कार आरोप
पोखरा, असार ३१चितवनकी एक महिलालाई आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाएर बलात्कार गरेकाे आरोप एक एसएसपीमाथि लागेकाे छ।
चीनले अवैधरुपमा बाँध बनाएको भन्दै पाकिस्तानको मुजफरवादमा व्यापक प्रदर्शन
एजेन्सी, असार ३१चीनले अवैधरुपमा पाकिस्तानको मुजफरवादमा रहको निलम र झेलुम नदीमा बाँध बनाएको भन्दै स्थानीयहरु
काठमाडौँ, असार ३१अभिनेत्री दीपाश्री निरौलालाई ‘क्षमा’ गरिदिन आफ्ना प्रशंसकसँग महानायक राजेश हमालले आग्रह गरेका छन्
पाकिस्तानको रणनीतिक नाटक सकियो, अमेरिकाले चीनविरुद्ध ‘ठूलो लडाईं’को तयारी गर्दै
एजेन्सी । अमेरिकाका लागि पाकिस्तानको क्षेत्रीय मेसिनेसन (जालसाझी) ले अब रणनीतिक उद्देश्य पूरा नहुने भएको